यि सर्प ले टोक्यो भने चाडै मृत्युु हुन्छ । अति नै खतरनाक सर्पहरु
यी हुन् अत्यधिक खतरानाक र बिषालु सर्पहरु । यी सर्प ले टोके के गर्ने ? पढ्नुहोस पूरा जानकारी Nepali Health Media
सर्प, जसलाई देख्ने बित्तिकै आङ सिरिन्ङ हुन्छ । नहोस पनि त कसरी ? सर्प ले टोके पछि हामी, जीवन र मृत्युु को दोसाँधमा पुग्दछौ । तर यति धेरै भने डराइरहनु पनि पर्दैन किनकी सबै सर्पहरु बिशालु हुदैनन । नेपाल मा पनि के हि यस्ता सर्प छ्न जस्ले टोक्दा हामिलाई के हि हुन्न तर के हि हुन्न भन्दै मा सर्प ले टोके पछि तत्काल साबुन पानी ले धुने र सर्प को उपचार गर्ने ठाउँ सम्म पुर्याउन भने ढिला गर्नु हुदैन । के थाहा कतै बिशालु सर्प ले पो टोक्यो कि? यदि बिशालु सर्प ले टोकेको रहेछ भने पनि समय मा उपचार गर्न सक्दा बाच्न सकिन्छ यदि के हि कदम बिशालु सर्प ले टोकेको रहेछ र उपचार गर्न ढिला भयो भने यो सन्सार त्याग्न बाध्य पनि हुन्छौं ।
विश्व मा लगभग 3400 प्रजातिको सर्पहरु पाइन्छ । जसमा 600 प्रजातीहरु बिषालु हुन्छन । तर यी 600 प्रजाती मध्य केवल 200 प्रजाती को सर्पको टोकाईले मात्र मानिसको मृत्यु निस्चित हुन्छ ।
यी 200 बिशालु सर्पका प्रजाति मध्य के हि प्रजातिका सर्प अति बिशालु सर्प छन जुन नेपाल मा र के हि अन्य देश मा अतिनै पाइने गर्छ र त्यस्ले टोकेको के हि क्षणमा उपचार नभए मानिस को मृत्यु पनि निस्चित हुन्छ । आउनुहोस जानौ यीनै 3वटा अति बिशालु सर्प को बारेमा, जुन अहिले सम्म धेरै को काल बनेर आएको छ ।
1. king Cobra (गोमन सर्प)
Kina cobra विश्व कै लामो बिशालु सर्प हो । किङ कोब्राको लम्बाई6मिटर सम्म लामो हुन्छ ।
यो सर्प को बीस मा न्युरो-टोक्सिन नामक poision हुन्छ र यसले टोकेको3घन्टा को समय अवधी भित्र उपचार सफल नभए मृत्यु निस्चित छ ।
किङ कोब्रा बिसालु मात्र नभैइ बलवान् पनि हुन्छ । यसको टोकाई बाट मानिस र साना जनावर को मात्र नभैइ ठुला जनावर हात्ती, जिराफ हरुको पनि मृत्यु निस्चित हुन्छ ।
यो यति सम्म सक्तिसाली छ कि यसले अर्को बिशालु सर्पको सिकार गरि खान पनि सक्दछ।
किङ्कोब्रा को अर्को रोचक कुरा , यो 15 दिन सम्म के हि नखाई पनि बाच्न सक्दछ ।
किङ कोब्रा नेपाल, भारत र दछिण एसिया मा अतिनै पाइने गर्दछ ।
किङ कोब्रा आफ्नो बीस लाई त्यति छिटो बाहिर निकाल्दैन । कहिले काहीँ यसले टोक्दा पनि बीस छोडेको हुदैन । तर बीस छोडेको छैन कि भनेर उपचार गर्न चै ढिला कदापी नगर्नु होला ।
किङ कोब्रा अरु साप भन्दा अति छिटो डराउने साप हो र त्यही डर को कारण आफ्नो सुरक्षा को निम्ति डस्ने गर्दछ ।
यो साप ले टोक्दा यसमा भएको न्युरो-टोक्सिस नामक बीस, हाम्रो शरीर को रगत मा मिस्रण हुन्छ र उक्त बीस मुटुमा पुग्दछ । न्युरो-टोक्सिस ले शरीर को रगत लाई जमाउने काम गर्दछ । र जब न्युरोटोक्सिन र रगत को पुर्ण रुपमा मिस्रण हुन्छ तब शरीर मा भएको सबै रगत बिस्तारै बिस्तारै जम्न सुरु हुन्छ र मानिस मर्ने गर्छ ।
2: करेत सर्प
करेत सर्प एक खतरनाक सर्प हो । यो सर्पको औसत लम्बाई3फुट हो । तर यो सर्प5फुट लम्बाई सम्म बढन सक्छ । Male करेत सर्प, female करेत भन्दा थोरै लामो पुच्छर भएको हुन्छ ।
यसको टाउको समतल आकार को हुन्छ भने शरीर बेलनाकार र पुछर सानो अनि गोलाकार हुन्छ । यो सर्प को सरिर गोलो र सेतो रङको रिङ आकारले बेरिएको हुन्छ भने यसको मुनि को भाग सेतो रङ को हुन्छ ।
यो सार्प को आँखा अति नै सानो हुन्छ ।
करेत सर्प नेपाल, भारत, र दछिण एसिया मा आत्यधिक पाइने अति नै बिशालु सर्प हो ।
यो सर्प को शरीर मा न्युरोटोक्सिस नामक poison हुन्छ । यो सर्प को विष कोब्राको भन्दा5गुणा बढि खतरनाक हुन्छ । मत्लब5थोपा कोब्रा को विष बराबर 1 थोपा करेत सर्पको विष हुन्छ । यसको टोकाई बाट2देखि3घन्टा को समय मा मानिस को ज्यान जाने गर्दछ ।
करेत सर्पले प्राय जसो सुतिरहेको समय, राती को समय मा मानिस लाई टोक्ने गर्दछ । यो सर्प ले टोकेको हत्तपत्त थाहा हुदैन किनकी यसको टोकाइ र लाम्खुट्टे को टोकाइ उस्तै हुन्छ । यो सर्प उज्यालो समय मा मानिस सुत्ने बेड मा, सिरानी मुनि, भित्ता को कुना काप्चाहरु मा लुकेर बस्ने गर्दछ र राती भए पछि बाहिर निस्किने गर्दछ ।
करेत सर्प दिन को समय लट्टिने गर्छ भने अँध्यारो मा अतिनै चलाख बन्ने गर्दछ । यसको को विष अरु सर्पर्पको भन्दा फरक र अति विषालु हुन्छ । यो सर्प ले टोक्दा यसको असर बिस्तारै हुने गर्दछ । यसले टोकेको 15 देखि 20 मिनेट पछि निन्द्रा लाग्ने, पसिना निस्कन सुरु हुने, दम को जस्तो श्वास प्रस्वास बढ्ने , बोमिट हुन खोज्ने र टाउको दुखेको जस्तो महसुस हुने गर्दछ । यसको विष ले मानिस को दिमाग, मुटु, र आखाहरुमा गहिरो असर हुन असर सुरु गरि 1 घन्टा भित्रमा उपचार नभए ज्यान लाने गर्दछ ।
3: Russell Viper
Russel Viper जस्को नेपाली मा बाघे सर्प भनेर चिनिन्छ । यो सार्प को लम्बाई 1 देखि 1.5 मिटर सम्म को लामो हुन्छ । यो सार्प प्राय चिसो मौसम मा बढी निस्किने गर्दछ । रसल भाइपर अति नै विषालु सर्प हो । यो सर्प को टाउको त्रिकोण आकार को हुन्छ । यस्को टाउको देखि पुच्छर सम्म एकै प्रकार को बुट्टा भएको देखिन्छ । यसको शरीर मा सेतो, कालो, brown, हलुका पहेलो र चक्लेटी रङ को बुट्टाले भरिएको हुन्छ ।
यो सर्प प्रायजसो घर मा भन्दा खुल्ला ठाउँ र झाडीहरु बढी भएको छेत्र मा पाइने गर्द छ । यो सर्प नेपालमा भन्दा बढी भारत मा पाइने गर्दछ । यो सर्प को विषमा हेमो-टोक्सिस नामक Poison हुन्छ जुन अति नै खतरानाक र पिडादायि हुन्छ । जब रसल भाइपर ले टोक्छ, तब शरीरमा अति नै पोल्ने र छट्पटी बढ्ने गर्दछ । यदि यस्को टोकाई पश्चात् छिटो भन्दा छिटो उपचार नभए मृत्यु निस्चित हुन्छ ।
4: Saw Scaled Viper
भाइपर बिस्वभरी पाइने एक प्रजाती को सर्प हो । यसको सबै प्रजाती हरु विषालु हुन्छन । तर पनी भाइपर सर्पहरु मध्य को सबै भन्दा विषालु प्रजाती saw scaled viper र चेन भाईपर हो । यो सर्प हेर्दा अतिनै सानो हुन्छ तर जति सानो त्यस्को ठिक उल्टो उति धेरै विषालु हुन्छ । यो साप को लम्बाई 1 फुट देखि3फुट सम्म हुन्छ । यो सर्प नेपाल, भारत र दछिण पुर्बी एसिया मा पाईन्छ । सानो आकार मा भएको यो सर्प यति फुर्तिलो हुन्छ कि यसले टोकि सके पछि आफ्नो ज्यान जोगाउनको निमित्त 1 सेकेन्डमा5देखि 10 मिटर टाढा भाग्ने गर्दछ । यो सर्प जेष्ठ, असार, श्रावण र भदौ महिना मा बढि भेटिने गर्छ । यो सर्प वर्षा याममा वर्षा भए पछि सिकार को खोजमा सुख्खा, र न्यानो ठाउँ तिर प्रवेश गर्दछ ।
यसले टोकेको आधा घण्टा भित्र मानिस को मृत्यु हुन्छ । यो सार्प ले सरिर को जुन भाग मा टोक्दछ त्यहा अत्याधिक रगत बग्न सुरु हुन्छ । टोकेको 1 मिनेट पछि पुरै शरीर को अङ्ग आत्यधिक पोल्छ र छ्टपटि हुन सुरु हुन्छ । यसले टोकेको के हि क्षणमा प्ब्लड प्रेसर को चाप ह्वात्तै घट्न थाल्छ र के हि क्षण पछि पटक पटक ब्लड बमिट हुन सुरु हुन्छ । यो सर्प को टोकाई बाट ग्रसित ब्यक्ती 30 देखि 35 मिनेट मा उपचार सम्भव नभए सन्सार बाट सदाको लागि बिदा हुनेछ । एउटा राम्रो कुरा के छ भने यो सर्प नेपाल मा अति नै कम मात्रा मा पाइने गर्दछ ।
5: Eastern Brown Snake
अस्ट्रेलिया मा पाउने यो सर्प अत्याधिक विषालु हुन्छ । यसको अन्दाज तपाईं यसरी पनि लगाउन सक्नु हुन्छ कि यसको 1 थोपा विष लाई 10,000 भाग लगाउने हो भने पनि 1 भाग विषले नै मानिस को ज्यान लिन काफी हुन्छ ।
सबै भन्दा दुखद कुरा यो हो कि, यो सर्प अस्ट्रेलियाको मानिस बसोबास गर्ने ठाउँमा अत्याधिक पाइने गर्दछ ।
अस्ट्रेलियामा सर्प को टोकाई बाट मृत्यु हुने मध्य 90% मानिस को यहि सर्पको टोकाई बाट मृत्यु भएको हुन्छ ।
यो सर्प को एक सानो बच्चा पनि जो कोहि ब्यक्ति को ज्यान लिन काफी हुन्छ । यो सर्पले आफुलाई अलिकति मात्र खत्रा भएको महसुस गर्यो कि मानिसलाई रात दिन लगाई खेदाइ-खेदाइ टोक्ने गर्दछ । यो सर्प साच्चै नै एक बिख सङ्गै इख राख्ने सर्प पनि हो । प्राय कुनै पनि सर्प ले हत्तपत्त टोक्दैन, सर्पले टोक्नु भनेको सर्प ले आफ्नो ज्यान खतरा बाट बचाउन खोजेको हो । सर्प लाई के हि नगरी नचलाइ उस्को स्थान मा छोड्दिने र आफुले उस्लाई जानेर वा अन्जान मा बिगार नगर्ने हो भने कुनै पनि सर्प ले टोक्दैन यो सर्प पनि त्यस्तै सर्प हो जसलाई नचलाई सामुन्ने पर्दा पनि टोक्दैन ।
यो सर्पले टोकेको 30 देखि 40 मिनेट समय अवधी भित्र मानिस को ज्यान जाने गर्दछ । यो सर्प अन्य सर्प भन्दा अलिक फरक व्यवहार भएको सर्प हो । यो सर्प को आगाडी जब के हि चिज हलचल हुन्छ तब यो सर्पले खत्रा को महसुस गरि खेदाई-खेदाइ टोक्ने गर्छ तर यो सार्प को सामुन्ने पर्दा पनि हलचल नगरी , नहल्ली उभिने हो भने यसले कहिले टोक्दैन ।
तपाइलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? तपाइको प्रतिक्रिया तलको कम्मेन्ट बक्स मा लेखी सबैमा जानकारी प्रदान गर्न धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस । यस्तै यस्तै अति नै महत्वपूर्ण रोचक जानकारीहरु पढ्न को लागि Nepali Health Media भिजिट गर्दै गर्नुहोस । यो नया साइट भएका ले यहाँहरुको साथको एक्दमै खाचो छ । त्यसैले सहि जानकारी मार्फत यहाँहरुलाई सहि ज्ञान प्रदान गर्ने यस साइट लाई चाडो भन्दा चाडो अगाडि बढाउन सक्दो सेयर गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछौं ।